I-Alure Stanthorpe - Itende le-Glamping - I-Airbnb
I-Alure Stanthorpe - Itende le-Glamping
Mount Tully, Queensland, i-Australia
Itende ibungazwe ngu-Marion
Izwa itende lase-Australia eligcwele uthando neliwubukhazikhazi obugcwele ubukhazikhazi bezivakashi eziqaphela kakhulu. I-Glamping iyikhempu esesitayeleni kakhulu oyoke ube nayo! Itende lethu liphelele ngakho konke ongeke ukucabange. Siyaziqhenya ngokuba ngabokuqala ukuletha leli zinga lokuklama kanye nokuqamba okusha okunethezeka e-Australia.
Itholakala endaweni ephakeme emangalisayo enkabeni ye-Queenslands Granite Belt, isifunda sewayini sase-Australia esihamba phambili, itende elikhazimulayo liza nakho konke okunethezeka ongayilindela ku-villa yezinkanyezi ezinhlanu futhi lihlinzeka ngokukhempa okungakaze kucatshangwe noma okuhlangenwe nakho kwe-glamping.
I-villa yethu (engafakwanga) yase-Afrika enetende i-safari ingama-56 m2 futhi yakhiwe emphemeni omkhulu wezingodo ngakho konke okusemandleni akho.
Ngena ngaphakathi uzomangala ukuthi usetendeni, ngenxa yedizayini yalo eyinkimbinkimbi kanye nokulingana. Idalelwe ukuzijabulisa, itende elivalekile liyindawo evulekile engamamitha-skwele angama-56 okugcina ekukhempini okunethezeka. Ifaka ikhishi eligcwele, igumbi lokugezela elinendlu yokugezela, izikhathi zokuqokwa kwaphezulu, impahla yasendlini kanye nezinto zokufakelwa kanye ne-eco-fireplace kanye ne-airconditioning edonsayo. Akukho okunye ongakufisa.
Izungezwe idwala legwadle elimangalisayo nehlathi lemvelo elinikeza indawo ekahle yama-kangaroo, ama-koalas, izinyoni nezinye izilwane zasendle. Zibone ngeso lengqondo uzimboza ngenhlanganisela eyingqayizivele yokunethezeka nemvelo, ubona izilwane zasendle uhlezi embhedeni wakho wamaphosta amane, uhlezi esiteji nengilazi yewayini lendawo eliwine imiklomelo, noma ucwiliswe ngaphansi kwe-Milky Way endaweni yakho yangasese yangaphandle eshisayo - indawo enhle yokubaleka. .
Amanani okuhlala kwakho afaka ubhasikidi wethu omuhle we-'Tastes of the Granite Belt' webhulakufesi wezwekazi onemikhiqizo ehlukahlukene yasendaweni. Kunjalo, siphinde sihlinzeke ngezingubo zokugqoka kanye namaslipper, amafutha e-Washpool Farm massage, i-GHD hair straightener, i-L'Occitane toiletries, i-Wi-Fi, i-Netflix, nokukhethwa komagazini bamanje, ama-CD nama-DVD.
I-Alure ine-'pantry evulekile' etholakalayo enezinto ezibalulekile zasekhishini ukuze uhlale, okuhlanganisa nobhontshisi wekhofi we-Summit womshini we-espresso ozenzakalelayo, okukhethekile kwe-Twining kanye netiye le-herbal, amafutha omnqumo wendawo, uviniga obhalsamu, ubisi, ijusi yendawo, usawoti, upelepele, ushukela, ihhavini. izikhwama, i-foil, nokugoqa okujabulisayo.
Sicela uqaphele: Itende alibhenywa ngaphandle nangaphakathi.
ubusuku obungu-7 e- Mount Tully
Hlola ezinye izinketho ezise- Mount Tully namaphethelo